Sharciga Kheyraadka Biyaha iyo faa’iidada uu yeelan karo – Kalfadhi
in Falanqeyn, Shuruuc iyo Hindise-Sharci, Warar
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 11-kii bishii November ansixiyay hindise-sharciyeedka kheyraadka biyaha oo ay diyaarisay Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha. Waa sharci ka kooban 9-cutub oo qeexaya kheyraadka biyaha dalka, lahaanshaha, xuquuqda, hay’adda ka shaqeynaysa, rukhsadda iyo sida looga faa’iideysanayo.
“Waxa ay iila muuqataa in uu yahay sharci laga soo shaqeeyay, waxtar wanaagsanna u leh ka faa’iideysiga biyaha labada webi ee dalka mara,” ayuu Kalfadhi u sheegay Cabdifataax Macallin Nuur oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka.
Wuxuu intaa ku daray inuu sharcigan billow fiican u yahay ka faa’ideysiga kheyraadka biyaha dalka iyo in loo qeybsado si siman oo loo wada dhan yahay.
Cabdifataax ayaa aaminsan in sharcigan uu meesha ka saarayo si xun u isticmaalka biyaha qaranka.
Qodobbada ugu muhiimsan ee sharciga waxaa ka mid ah lahaanshaha biyaha. Sharciga wuxuu dhigayaa in dhammaan biyaha qulqula dusha sare ee dhulka iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira, xataa haddii aan dhulka hoostiisa weli laga soo saarin, ay yihiin hanti guud. Waxaa loo tixgelinayaa kheyraad qaran oo dabiici ah oo loo dhowri doono, loona isticmaali doono si siman ama wadajir ah, sida ku xusan cutubka 1-aad qodobkiisa 3-aad.
Isticmaalka kheyraadka biyaha oo ay ku jirto xuquuqda biyaha wuxuu sharciga ku leeyahay: [qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo biyo uu isticmaalo, si waafaqsan qawaaniinta sharcigan, sida ku qoran cutubka 2-aad qodobkiisa 5-aad.
Sida uu qabo sharciga, waxaa la dhisi doonaa hay’adda Kheyraadka Biyaha Qaranka oo mas’uul ka noqonaysa qorsheynta, maareynta, isticmaalka iyo ilaalinta kheyraadka biyaha. Waxaa uu sharcigu siinayaa awoodaha ay u baahan tahay si ay u fuliso waajibaadkeeda.
Xubnaha hay’adda la dhisi doono waxa ay ka koobnaan doonaan 23 xubnood oo 5 uu soo magacaabayo wasiirka mas’uulka ka ah kheyraadka biyaha; 18-ka kalena waxay ka kala imaanayaan maamul-goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Sharciga meel-maray ee kheyraadka biyaha, wuxuu qeexayaa in biyo-gelinta guud ay u baahan tahay ruqsad uu qofku ku soo codsanayo hannaan ugu dambeyn lagu siin karo ama loogu diidi karo. Wuxuu mamnuucayaa sharciga in biyo haraa ah ama wasakh ah lagu waraabiyo dalag beereedka ceyriinka lugu cuno.
Biyaha wuxuu sharcigu tilmaamayaa in loo dejinayo khidmad iyadoo mar walba la xusuusan yahay inay tahay xuquuq dadka ka dhaxeysa oo asaasi ah.
Tayada biyaha, sida ku tilmaaman cutubka 6-aad, hay’addu waxay daraasad ku sameynaysaa isla markaana dejinaysaa – ujeeddada iyo heerka tayada biyaha ee biyo-rogga webi kasta.
Sharcigan waxa uu qodobo badan kala siman yahay sharcigii biyaha oo dowladdii dhexe oo la ansixiyay sanadku markuu ahaa 1972-kii.
W.D: Mahad Maxamed Cali